January 8, 2022 – नेपाली सूर्य
January 8, 2022 Nepali SuryaLeaveaComment on बाघले मान्छेलाई खा’इ’रहेको थियो त्यसैबेला नजिकै प्रहरी पुग्दा…
बाघको आ’क्र’म’णबाट बिहीबार पनि राप्तीसोनारी गाउँपालिका–४ प्रसोनाकी ५२ वर्षीया लीला विष्टको मृत्यु भएको छ। यसअघि बाँके निकुञ्जको गाभर र नरैनापुरमा बाघको आ’क्र’म’णबाट दुई जनाको मृत्यु भएको थियो। बाँके निकुञ्जमा बाघको सङ्ख्या बढ्दा छेउछाउका सामुदायिक वनमा बाघ देखिने गरेको स्थानीयले बताएका छन्। बुधबारमात्रै राप्तीसोनारी–४ बैजापुरकी ३० वर्षीया दुर्गा थारूलाई बाघले आक्रमण गरेको थियो । बाघको पञ्जाबाट […]
January 8, 2022 Nepali SuryaLeaveaComment on पुरुषले महिलाका व’क्षस्थ’लमा १० मिनेट सम्म नजर दौडाउनु भनेको आधा घण्टासम्म जिमखानामा गएर व्यायाम गर्नु सरह
काठमाडौ। विभिन्न अध्ययनहरुले बताएका छन् की पुरुषहरु महिलाका व’क्षस्थ’ल प्रति सबैभन्दा बढि आकषिर्त हुन्छन्। अब पुरुषहरुलाई महिलाका वक्षस्थलमा नजर पूराउने नयाँ बहाना मिलेको छ। एक अध्ययन अनुसार महिलाका व’क्षस्थ’ल हेर्नाले पुरुषको आयु बढ्दछ। न्यू इंगल्याण्ड जर्नल अफ मेडिसिनमा केही समयअघि छापिएको एक शोध अनुसार दिनहुँ औ’ष’तमा १० मिनेट महिलाको व’क्ष’स्थलमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरिकाले हेर्ने पुरुषहरुको […]
January 8, 2022 January 8, 2022 Nepali SuryaLeaveaComment on योगेश मात्र होइन नारायणहिटी बेच्ने केपीलाई पनि जेल हाल्छु: मन्त्री प्रेम आले
काठमाडौ। नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय भित्र रेष्टुरेन्ट बनाउन पूर्व पर्यटन मन्त्रीले स्वीकृति दिएको र बहालवाला मन्त्रीले रोकेको विषय यतिबेला चर्चाको शिखरमा छ। बतास समूहलाई सङ्ग्रहालयमा होटल खोल्न अनुमति दिएको भन्दै पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराईको चर्को आलोचना र विरोध भइरहेको छ भने त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिएको भन्दै पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको प्रशंसा चुलिएको छ। यसबारेमा मंगलबार सामाजिक […]
जानिराखौं: दाह्री पाल्ने मान्छेमा कुकुरको भन्दा बढि किटाणु हुन्छ
January 8, 2022 Nepali SuryaLeaveaComment on जानिराखौं: दाह्री पाल्ने मान्छेमा कुकुरको भन्दा बढि किटाणु हुन्छ
काठमाडौ। कतिपय मानिसहरुको सौख दाह्री पाल्ने। कतिले यसलाई फेसनको रुपमा पनि लिने गर्छन्। जहाँ १८ देखि ७६ वर्ष उमेर समुहका दाह्री पालेका मानिसहरुमाथि अध्ययन गरिएको थियो। हुन त दाह्री पाल्दा केही फोहोरी देखिन्छ भन्ने टिप्पणीहरु पनि हुने गर्छन्। तथापी पुरुषहरु युनिक देखिन वा आफनो स्टायललाई मेन्टेन गर्न पनि दाह्री पाल्ने गर्छन्। दाह्री पाल्नेहरुका लागि भने […]
January 8, 2022 Nepali SuryaLeaveaComment on यो यस्तो अनौठो ठाउँ जहाँ ६–७ वर्षको उमेरमा यौ”न सम्बन्धको लागि तालिम दिईन्छ !
तपाईंलाई अचम्मका लाग्ला कि एउटा जनजाती यस्तो पनि छ जहाँका ६–७ बर्ष उमेरका बालबच्चाले स म्भोग ग’र्न थाल्छन् । पपुआ न्यू गिनीमा बस्ने ट्रोबियान्ड जनजातीको समूदायमा यस्तो प्रचलन छ । यतिमात्र होइन, ११–१२ वर्ष भएपछि यहाँका बच्चाहरुको विवाह पनि भइसक्छ । अझ अचम्मको कुरा के छ भने यहाँका बच्चाहरुलाई शा’रि’रि’क स’म्ब’न्ध बनाउनका लागि तालिम पनि […]
January 8, 2022 Nepali SuryaLeaveaComment on घाँस काट्ने क्रममा खान आएको बा’घसँग ल’डेर आफ्नो ज्या’न जोगाएकी दुर्गा’को स’हासलाई सलाम !
गाउँमा विवाह हुने भएपछि सहयोगका लागि राप्तीसोनारी गाउँपालिका–४, की दुर्गा थारु गाउँ नजिकैको गौरी सामुदायिक वनमा पात टिप्न गइन्। एक्लै जंगल गएकी उनी पात टिप्दै थिइन्। सुनसान जंगलमा सामान्य आवाज आयो। त्यो आवाज मान्छेको थिएन, कुनै जनावर हिँडिरहे जस्तो थियो। उनी अलि चनाखो बनेर पात टिप्दै थिइन्। एक्कासी बाघ आएर उनको हातमा झम्टियो। घना सुनसान […]
अचम्मका डाक्टर, महिला पत्रकारलाई खुसुखुसु….
January 8, 2022 Nepali SuryaLeaveaComment on अचम्मका डाक्टर, महिला पत्रकारलाई खुसुखुसु….
काठमाडौं, पुस २३ – नक्कली डाक्टरले उपचारका नाममा बिरामीका आफन्तलाई ठगी गरेका घटना नेपालमा खासै नौलो होइन । तर,सक्कली डाक्टरले हस्पिटलबाटै योजनाबध्द ठगी धन्दा चलाएको कुरा भने सुन्दा अचम्मलाग्दो छ । एकजना पीडितले महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालका एक चिकित्सकले सेतो गाउन भिरेर गरेका काला कर्तुतहरु सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेपछि अस्पतालबाटै ठगी हुने गरेको खुलासा भएको हो […]
January 8, 2022 Nepali SuryaLeaveaComment on देश बनाउन आमाको कसम खाएका लिङ्देनले दिए राप्रपाकै नेता हरुको मुटु हल्लिने गरी चेतावनी, बालुवाटार, खुमलटार र बालकोटसम्म तरंग
काठमाडौ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी’का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आफ्नै पार्टीका केही नेता हरुलाई ठाँउ नभएको बताए का छन्। राप्रपा नेपालले बिहीबार धनगढीमा आयोजना गरेको सुदूर पश्चिम प्रदेश स्तरीय भेलामा बोल्दै अध्यक्ष लिङ्देनले गलत मनसाय राखेर राप्रपामा आउनेलाई कुनै ठाँउ नदिइने बताएका हुन्। उनले भ्रष्टाचार गर्ने र देश लाई अस्थिरता तर्फ धकेल्ने जस्ता गलत मनसाय राखेर राप्रपामा […]
बजारमा के बिक्दैन? टिभी सेलिब्रिटीले पाद बोतलमा भरेर कमाइन् ६० लाख रुपैयाँ
January 8, 2022 Nepali SuryaLeaveaComment on बजारमा के बिक्दैन? टिभी सेलिब्रिटीले पाद बोतलमा भरेर कमाइन् ६० लाख रुपैयाँ
काठमाडौ। तपाईंले कयौँ अनलाईन व्यवसाय बारे सुन्नुु भएको होला। तर तपाईंले पादको व्यवसायबारे सायदै सुन्नुभएको होला। तर यो कुरा साँचो हो। अमेरिकी रियलिटी टिभी स्टार स्टेफनी म्याटो यो व्यवसायको विषयलाई लिएर व्यापक चर्चामा छिन्। स्टेफनी म्याटोले एक भिडियोको माध्यमबाट यो कुराको खुुलासा गरेकी हुन्। उनले आफ्नो फार्ट (पाद) लाई अनलाइनमार्फत् बेचेर लाखौँ रुपैयाँ कमाउँछिन्। उनको […]
प्रेम आलेको अर्काे एक्सन: पशुपति धर्मशालाबाट पनि बतास समूह धपाउन समिति गठन
January 8, 2022 Nepali SuryaLeaveaComment on प्रेम आलेको अर्काे एक्सन: पशुपति धर्मशालाबाट पनि बतास समूह धपाउन समिति गठन
काठमाडौं। नारायणहिटी दरबार परिसरभित्र चलाउन खोजिएको रेष्टुरेन्ट निर्माणको काम भत्काउन निर्देशन दिएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले फेरि अर्काे कदम चालेका छन्। मन्त्री आलेको निर्देशनमा मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा एक छानबिन समिति गठन गरेर नेपाल–भारत पशुपति मैत्री धर्मशालाको सत्यतथ्य छानविन गर्न लगाइने भएको छ। पाँच सदस्यीय रहेको टोलीले […]